Horudhac: West Bromwich Albion vs Liverpool…(Miyey Reds gali kartaa booska afaraad ee kala sarreynta horyaalka?) – Gool FM
Ahmed Nur May 16, 2021
(West Bromwich) 16 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo rajo wanaagsan ka qabta inay kusoo laabato boosaska afarta sare ee horyaalka Ingiriiska ayaa caawa booqaneysa naadiga xaqiijisay inay heerka labaad u laabatay ee West Bromwich Albion kulan ka tirsan Premier League.
Liverpool ayaa haddii ay guuleysato hal dhibic u jirsan doonta kooxda ku jirta booska afaraad ee Chelsea iyadoo fursad kale u aragta kulanka Blues ay la ciyaari doonto Leicester City ciyaarteeda xigta ee horyaalka, maadaama natiijo walba oo ciyaartaas ka dhalata ay Reds ka saacidi doonto inay gasho booska afaraad.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 06:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Mike Dean (England)
West Bromwich ayaa dib u heleysa ciyaaryahanka amaahda ugu ciyaara ee Ainsley Maitland-Niles kaasoo seegay kulankii Arsenal maadaama uusan heshiiska u ogoleyn inuu ka hor tago kooxda mulkiyaddiisa iska leh.
Robert Snodgrass ayaa wali kasoo kabanaya qaliin looga sameeyay dhabarka isagoo ciyaartan seegaya, waxaa sidoo kale dhaawac muruqa bowdada ah ku maqan Branislav Ivanovic.
Dhanka kale, ma jirto rajo buuran oo uu Jurgen Klopp ku baddeli karo shaxdii uu kaga hor tagay Manchester United, waxaase wali shaki la gelinayaa inay ciyaari karaan Ozan Kabak, James Milner, Naby Keita iyo Ben Davies.
Lix ka mid ah siddeeddii jeer ee ugu dambeysay oo ay Premier League labadan koox wada ciyaareen waxay ku kala tageen barbarro, halka labada kalena ay guuleysatay Liverpool intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2016-17.
Reds ayaa guuldarro la’aan ah 11 ciyaarood oo ay Premier League ku wajahday West Bromwich iyadoo guuleysatay afar jeer, toddobo jeerna bareejo heshay.
Is-araggii hore ee xilli ciyaareedkan kulankii ka dhacay Anfield, West Brom ayaa dhammeystirtay kaliya 121 baas, waxayna 23 baas ka hooseeyeen tirada baasaska uu ciyaartaas dhammeystiray kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson.
West Bromwich ayaa guuldarro la’aan ahayd afartii ciyaarood ee ugu horreysay ee ay garoonkeeda ku ciyaartay tan iyo marka shaqada macallinnimo ee kooxda uu la wareegay Sam Allardyce iyadoo wax gool ah laga dhalin kari waayay isla markaasna ay dhalisay 17 gool, hase ahaatee, kaliya hal guul ayay gaartay toddobadii ciyaarood ee xigtay ee ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka, waxaana laga dhaliyay shan gool.
Guushii ugu dambeysay ee ay West Brom kaga gaartay garoonkeeda The Hawthorns koox soo qaadday horyaalka Ingiriiska waxay ahayd ciyaar ay Liverpool dubatay sanad ciyaareedkii 1980-81, waxayna guuldarreystay 17-kii jeer ee ka dambeysay iyadoo dhalisay kaliya sagaal gool, lagana dhaliyay 44 gool.
Albion ayaa la kulmi karta guuldarradii 20-aad ee horyaalka hal xilli ciyaareed gudihiis markii ugu horreysay tan iyo 2008-09.
Sam Allardyce waa guuldarro la’aan shantii ciyaarood ee ugu dambeysay oo uu Premier League kaga hor tagay Liverpool isagoo macallin ah, waxaana uu guuleystay hal kulan isagoo barbarro galay afarta kale, macallinkii ugu dambeeyay ee guuldarro la’aan ahaado LIX kulan oo uu horyaalka kaga hortagay Liverpool waxa uu ahaa Tony Pulis oo siddeed kulan guul u diiday Reds intii u dhexeysay 2011 illaa 2016.
Liverpool waa guuldarro la’aan toddobadii ciyaarood ee ugu dambeysay horyaalka iyadoo heysata shan guul iyo labo barbarro, waxayna tahay kooxda guuldarro la’aanta ugu dheer heysata xilligan horyaalka Premier League, hase ahaatee, waxay guuldarreysatay lix ka mid ah toddobadii kulan ee ka horreeyay toddobadii ugu dambeysay.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Jurgen Klopp ayaa guuleysatay lix ka mid ah siddeedii ciyaarood ee ugu dambeysay Premier League oo ay kusoo ciyaartay bannaanka garoonkeeda, hal jeer ayay barbarro gashay hal jeerna waa la garaacay.
Reds ayaa guul gaartay kaliya labo jeer 10-kii ciyaarood ee xilli ciyaareedkan horyaalka ay la ciyaartay kooxaha markaas ku jira lixda boos ee ugu hooseysa horyaalka, waxayna barbarro gashay shan jeer, saddex jeerna aa laga adkaaday, waxaana xusid mudan inay labada guulba ka gaartay kooxda Shiffield United.
Mohamed Salah ayaa kulammada bannaanka dhaliyay 12 ka mid ah 21-ka gool ee uu xilli ciyaareedkan ka dhaliyay Premier League, iyadoo fasalkii hore kaliya afar gool uu ku dhaliyay meel ka baxsan Anfield xilli uu ku dhammeystay 19 gool oo horyaalka ah.
Horudhac: Athletic Club vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Osasuna, Barcelona vs Celta Vigo...(Kooxaha ku loollamaya La Liga oo isku waqti ciyaaraya)